जुन महिनामा यी ४ ग्रहले गर्नेछन् राशि परिवर्तन, कस्तो रहला यसको प्रभाव ? हेर्नुहोस् ! – List Khabar
Home / राशिफल / जुन महिनामा यी ४ ग्रहले गर्नेछन् राशि परिवर्तन, कस्तो रहला यसको प्रभाव ? हेर्नुहोस् !
जुन महिनामा यी ४ ग्रहले गर्नेछन् राशि परिवर्तन, कस्तो रहला यसको प्रभाव ? हेर्नुहोस् !
admin3weeks ago राशिफल Leaveacomment 62 Views
जुन महिनामा सूर्य, बुध, शुक्र र मंगल ग्रहले आफ्नो राशि चिन्ह परिवर्तन गर्नेछन्। ग्रहहरुले आफ्नो राशि परिवर्तन गर्दा सबै राशिमा शुभ-अशुभ तरिकाले प्रभाव पर्ने गर्छ। जान्नुहोस् यसबारे बिस्तारमा…..
मंगल ग्रह कर्कट राशिमा
ग्रहहरुको सेनापति मंगल ग्रह २ जुन २०२१ को दिनबाट मिथुन राशिको यात्रा सकेर कर्कट राशिमा प्रवेश गर्नेछ। यस राशिमा मंगल २० जुलाईसम्म अवस्थित रहनेछ। चन्द्र ग्रहको स्वामित्व रहेको कर्कट राशिमा मंगल ग्रह नीच मानिन्छ। त्यस्तै, मंगल ग्रहलाई मकर राशिमा उच्च मानिन्छ। जन्म कुण्डलीमा मंगल ग्रहद्वारा रुचक योगको निर्माण हुनेछ जसको प्रभावको कारण मानिसले जीवनमा विभिन्न क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छ।
वृष राशिमा बुधको गोचर
बुद्धि तथा वाणीको प्रतिक बुध देव ३ जुन २०२१ को दिन आफ्नी मित्र ग्रह शुक्रको स्वामित्व रहेको वृष राशिमा प्रवेश गर्नेछ। यस राशिमा बुध ७ जुलाईसम्म रहनेछ। त्यसपछि, मिथुन राशिमा प्रवेश गर्नेछ। वृष राशिमा राहु पहिलेबाट नै बिराजमान रहेको छ। यस प्रकार बुधको प्रवेशले राहुको अशुभ प्रभाव कम हुनेछ, जसको परिणाम स्वरूप कुण्डलीमा राहु दोष केहि समयको लागि शान्त हुनेछ। बुध देव मिथुन तथा कन्या राशिका स्वामी हुन्। यसलाई मीन राशिमा नीच र कन्या राशिमा उच्च मानिन्छ।
सूर्य राशिको मिथुन राशिमा प्रवेश
ग्रहहरुको राजा मानिने सूर्य १५ जुनको दिन मिथुन राशिमा प्रवेश गर्नेछ। यस राशिमा सूर्य देव १६ जुलाईसम्म स्थित रहनेछन्। जसपछि सूर्य आफ्नो नीच राशि कर्कट राशिमा गोचर हुनेछ। सूर्य ग्रह सिंह राशिको स्वामी हो। सूर्य ज्योतिषमा एक प्रमुख ग्रह हो। यसलाई राजा, नेतृत्व, उच्च पद, सरकारी काम आदि को कारक मानिन्छ।
शुक्रको कर्कट राशिमा गोचर
भौतिक सुखको कारक मानिने शुक्र ग्रह २२ जुनको दिनबाट मिथुन राशिबाट कर्कट राशिमा प्रवेश गर्नेछ। शुक्र यस राशिमा १७ जुलाईसम्म अवस्थित रहनेछ। कर्कट राशिको स्वामी चन्द्र ग्रह हो र चन्द्र र शुक्र ग्रहलाई एक-अर्काको शत्रु मानिन्छ। त्यसैले, कर्कट राशिमा शुक्र ग्रहको गोचर त्यति शुभ नहुने देखिन्छ। शुक्र ग्रहको यस गोचरले सबै राशिमा शुभ-अशुभ प्रभाव पार्नेछ।
Previous गायक एवं भ्वाइस अफ नेपालका निर्णायक दीप श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण, आइसीयूमा भर्ना
Next खाने तेलको मूल्य बढाउने दुई उद्योगलाई तीन-तीन लाख जरि,वाना,,,